အတိုချုပ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကိုကင်းကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တားမြစ်ထားမှုက Dopamine Transporter အပေါ်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုစေပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း (၂၀၁၄) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
အကျဉ်းချုပ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် Abstinence အဆိုပါ Dopamine Transporter အပေါ်ကင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု Sensitizes နှင့် (2014) ရှာမူးယစ်ဆေးတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
Neuropsychopharmacology။ 2015 ဖေဖော်ဝါရီ; 40 (3): 728-735 ။
2014 အောက်တိုဘာ 8 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ 2014 စက်တင်ဘာ 12 အွန်လိုင်း Prepublished ။ Doi: 10.1038 / npp.2014.238
Erin S ကို Calipari,1,2 Cody တစ်ဦးက Siciliano,2 ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတစ်ဦးက Zimmer,2,3 နှင့် Sara R ကိုဂျုံးစ်2,*
အထပ်ထပ်စမ်းသပ်-ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကင်းထိုးအောက်ပါကင်း-သွေးဆောင် locomotor အပြုအမူနှင့် dopamine တစ်ခုတိုးပွား (DA) လျတ်ဖြစ်ပေါ်ရသောရိုးရာာင်း Paradigm, မကြာခဏမူးယစ်ဆေးစွဲလေ့လာဖို့တစ်မော်ဒယ်အဖြစ်အသုံးပြုနေကြသော်လည်းအလားတူသက်ရောက်မှုကိုကင်းအောက်ပါသရုပ်ပြရန်ခက်ခဲပါပြီ Self-အုပ်ချုပ်မှု။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကကင်းမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို (IntA) ကို DA Transporter (DAT) မှာတိုးမြှင့်ကင်းအာနိသင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ကိုပြသပြီ သို့သော်အစဉ်အလာာင်း Paradigm မကြာခဏဆုတ်ခွာ / abstinence ကာလအောက်ပါတိုးမြှင့်သက်ရောက်မှုကိုပြ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ IntA-သွေးဆောင် IntA ၏ 1 သို့မဟုတ်3ကာလ၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်နေဖြင့် sensitive ကအဖြစ် DA function ကို, ကိုကင်းအာနိသင်နှင့်အားဖြည့်အပေါ်တစ်ဦး7ရက်ကြာ abstinence ကာလအချိန်သင်တန်းဆုံးဖြတ်သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကိုကင်းအာနိသင် IntA ၏3ရက်ပေါင်းသကဲ့သို့နည်းနည်းအောက်ပါတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နောက်ထပ်တစ်ဦး abstinence ကာလအောက်ပါလုပ်ခဲ့ပြီးကြောင်းပြသပါ။
ထို့အပြင် IntA plus abstinence သည်အခြားအုပ်စုများအားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုကင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ပိုမိုထွက်ပေါ်လာသည့် DA ထုတ်လွှတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုကင်း၏ DA ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းနှင့် DAT တွင်အသုံးပြုမှုကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းနှစ်ခုလုံးသည် DA အဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်သီးခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြစ်သည်။ တိုးမြှင့်ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် DA စနစ်၏ Inta-induced sensitization သည်ကိုကင်း၏အားဖြည့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်စေပြီး ၇ ရက်ကြာ abstinence ကာလပြီးနောက်တိုးပွားလာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရလဒ်များအရ DA စနစ်၏အသိအမြင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏အစောပိုင်းအဆင့်များ၌အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ have မှပါ ၀ င်နိုင်ပြီးထိန်းချုပ်မှုမရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်စေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ လူ့ဒေတာကပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း၊ အကဲဆတ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကာလတို့သည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ have မှပါဝင်သည်၊ ဤဖြစ်စဉ်များကိုပေါင်းစပ်သည့်လက်တွေ့မတိုင်မီမော်ဒယ်များကိုအသုံးချခြင်းနှင့် IntA ၏စံနမူနာများသည်လူ့စွဲလမ်းမှု၏ ၀ တ္ထုများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အရေးကြီးကြောင်းဖော်ပြသည်။
လူသားတွေအတွက်ထပ်ခါတစ်လဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစွဲမှဦးဆောင်ကြောင်းဆက်လက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမောင်းထုတ်ရန်စဉ်းစားနေကြရသောမူးယစ်ဆေးဝါးရရှိနိုင်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုးကျိုးများခန့်မှန်းတွေကို, ထိခိုက်မခံတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်ပြန့်ပြီ အရှင်ဤအပြုအမူ mediates သော neurochemical ဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်သဘောပေါက် (စွဲလမ်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမောင်းသောယန္တယားသို့အရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါVezina နှင့် Leyton, 2009) ။ အကဲဆတ်ခြင်းကြွက်မော်ဒယ်များ (စွဲလမ်းတစ် Translational မော်ဒယ်ဖြစ်ဖို့အကြံပြုခဲ့ကြRobinson နဲ့ Becker က, 1986; Post ကို, 1980), ဒါပေမဲ့အဲဒီ Paradigm အုပ်ချုပ်ရေး Non-ဆက်ပြောပါတယ်ပုံစံများ employ နှင့် neurochemical sensitive ကထိုကဲ့သို့သောသွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်ကဆက်ပြောပါတယ် Paradigm အတူသရုပ်ပြရန်ခက်ခဲခဲ့ပိုကောင်းမော်ဒယ်လူ့အလွဲသုံးစားမှုပုံစံများကြောင်းသိရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တိုးချဲ့-access ကိုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကို (dopamine Transporter (DAT) မှာကင်းအာနိသင်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် concomitant အပြုအမူသည်းခံစိတ်ထုတ်လုပ်ရန်အကြိမ်ကြိမ်ပြသခဲ့ပြီးCalipari et al, 2013a, 2013b, 2013c, 2013d; Calipari et al, 2014a, 2014b; ကူးတို့ et al, 2011, 2012, 2013a, 2013b; Oleson et al, 2011; Hurd et al, 1989) ။ ကိုကင်းထိတွေ့မှုများ၏အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical အကျိုးဆက်များ, အုပ်ချုပ်ရေးအကြိမ်ရေ, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနှင့် abstinence (အပါအဝင်အချက်များစွာ၏နံပါတ်အပေါ်သို့မှီခိုနေကြဂျုံးစ် et al, 1996: Vezina နှင့် Leyton, 2009; Bouayad-Gervais et al, 2014; Calipari et al, 2013a), ထိခိုက်ကင်းသက်ရောက်မှုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို (IntA) Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူမကြာသေးမီကအလုပ်ချက်ချင်း (Calipari et al, 2013d; အခန်း et al, 2012).
IntA (တိုင်း5မိ (30 မိ) ရှင်းလင်းဖို့ကိုကင်းစားသုံးမှုကန့်သတ်မယ့်ဝတ္ထု Self-အုပ်ချုပ်ရေးပါရာဒိုင်း access ကိုကာလဖြစ်ပါသည်အခန်း et al, 2012) ။ Inta သည်မကြာသေးမီက DAT တွင်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုကိုအသိသာပြုသည်ကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် DAT အပေါ်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုကန ဦး အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။Calipari et al, 2013d) ။ ဒီလုပျငနျး DAT မှာကင်းသက်ရောက်မှု၏ာင်း 24 ရက်ကြာ IntA အောက်ပါ 14 ဇဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကွောငျးဖျောပွခဲ့ပေမယ့်အဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ယာယီပရိုဖိုင်းကိုဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်ရိုးရာစမ်းသပ်-ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကင်း Paradigm အတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနှင့်ဆင်းရဲချို့တဲ့ထိခိုက်မခံတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးကြီးသောကဏ္ဍများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မကြာခဏ sensitized ကင်းတုံ့ပြန်မှု (abstinence တဲ့ကာလပြီးနောက်သည်အထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသည်မဟုတ်ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997; Robinson နဲ့ Becker က, 1986; Post ကို, 1980) ။ ထိုသို့ချက်ချင်းအောက်ပါ IntA ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုကင်းအာနိသင်အတွက်တိုး abstinence စဉ်အတွင်း incubate စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကိုကင်းအာနိသင်နှင့်ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ထိရောက်မှုအပေါ် abstinence တဲ့ကာလ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်, IntA Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏အစောပိုင်းအဆင့်စဉ်အတွင်း DAT မှာကင်းသက်ရောက်မှုများထိခိုက်လွယ်၏ယာယီပရိုဖိုင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ (ကိုကင်းအာနိသင်နှင့် dopamine နှစ်ဦးစလုံး၏ာင်းအတွက် IntA ရလဒ်များကို (DA) အချက်ပြကြောင်းပြသCalipari et al, 2013a, 2013d) ။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို IntA ကိုကင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု (၃) ရက်မျှသာပြုလုပ်ပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိရပြီး ၇ ရက်တာပုံမှန်မသောက်ခြင်းကာလသည်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုသိရှိလာစေသည်။ အဆိုပါ neurochemical အပြောင်းအလဲများကင်း၏အားဖြည့်ထိရောက်မှုအတွက် Inta- သွေးဆောင်တိုးနောက်ထပ်တစ်ခု abstinence ကာလအပြီးတွင်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်ရှိရာအမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများကိုဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ IntA-induced sensitization သည်လူသားများတွင်စွဲခြင်း၏အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဓာတုအကျိုးဆက်များ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။ IntA မော်ဒယ်များသည်ကိုကင်းဆေးစွဲခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသောအပြောင်းအလဲများကိုလေ့လာရန်အတွက်စံပြမော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အထီး Sprague-Dawley ကြွက် (375-400 ပါ g; Harlan Laboratories, ဖရက်ဒရစ်, မေရီလန်း), တစ်ဦး 12 အပေါ်ထိန်းသိမ်းထား: 12 ဇပြောင်းပြန်အလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ (0300 နာရီကိုချွတ်ထွန်း; 1500 နာရီပေါ်ထွန်း) အစားအစာနှင့်ရေနှင့်အတူ ကြော်ငြာ libitum ။
ကြွက် (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ anesthetized နှင့်နာတာရှည် indwelling jugular ပြွန်နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျCalipari et al, 2013d) ။ တိရစ္ဆာန်များ singly သျော, လူအပေါင်းတို့အစည်းအဝေးများ (0900-1500 နာရီ) တွင်တက်ကြွစွာ / မှောင်မိုက်သံသရာစဉ်အတွင်းအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာရာအရပျကိုယူခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များတိရိစ္ဆာန်များသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုးတဦးတည်း (FR1) တစ်ဦးကိုကင်း-တွဲလီဗာဖို့အချိန်ဇယားအပေါ် access ကိုပေးခဲ့ရာအတွင်းလေ့ကျင့်ရေးပါရာဒိုင်းခံယူ, သောတုံ့ပြန်အပေါ်သို့, (0.75 s ကိုကျော်ထုံမွှန်း4မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကိုကင်း၏သွေးကြောသွင်းဆေးထိုးစတင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတုန့်ပြန် / ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်, လီဗာပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်နှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအလင်းတစ် 20-s ကိုအချိန်ကုန်ကာလအတွက် illuminated ခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများပထမဦးဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုမဆို 20 တာဟာသို့မဟုတ်6ဇအများဆုံး, ကြာပြီးနောက်ရပ်စဲခံခဲ့ရသည်။ သိမ်းယူမှုစံတသမတ်တည်းအချင်းချင်းပြုတ်ရည်ကြားကာလနှစ်ခုရက်ဆက်တိုက်အုပ်ချုပ် 20 ထိုးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးချင်းစီ 6-ဇ session တစ်ခုအတွင်းမှာတော့, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် 12 မိနစ်အချိန်ကုန်ကာလအားဖြင့်ကွဲကွာ 25 ငါးမိနစ်လမ်းကြောင်းများအတွက်ကင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီ 5-မိ session တစ်ခုအတွင်းမှာတစ်ဦးချင်းစီပြုတ်ရည်စဉ်အတွင်းထက်အခြားအဘယ်သူမျှမကုန်ဆုံးချိန်ရှိကြ၏, ထိုတိရိစ္ဆာန်ကိုကင်းတဲ့ 1-s ကိုပြုတ်ရည် (1 mg / kg / အပေါ်က) ​​ကိုလက်ခံရရှိရန် FR0.375 အချိန်ဇယားပေါ်လီဗာကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်များ voltammetry သို့မဟုတ်ခုံစမ်းသပ်ချက်မတိုင်မီ IntA Self-အုပ်ချုပ်ရေး 1 သို့မဟုတ်3ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်စေလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များ၏တစ်ဦးကသီးခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုသူတို့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးလီဗာမှဝင်ရောက်ခွင့်အဘယ်သူမျှမခဲ့သောကာလအတွင်းတစ်ဦး3ရက်ကြာ abstinence ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် IntA Self-အုပ်ချုပ်ရေး7ရက်ပေါင်းခံယူ။
တိရစ္ဆာန်များနောက်ဆုံး Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခု (~18 ဇ) တွင်အောက်ပါနံနက်အချိန်၌အစာရှောင်ခြင်း-scan ကသိသိ voltammetry စမ်းသပ်ချက်အဘို့အဦးသေဆုံး, ဒါမှမဟုတ် abstinence ၏သတ္တမနေ့၌ခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့တစ်ရှူး (ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်Calipari et al, 2013b; Siciliano et al, 2014) ။ တစ်ဦးကကာဗွန်ဖိုင်ဘာ (Goodfellow ကော်ပိုရေးရှင်း, Coraopolis, PA) microelectrode (100-200 μMအရှည်,7μMအချင်းဝက်) နှင့်စိတ်ကြွလှုံ့ဆော်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဟာ NAc ၏အဓိကသို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ DA လွှတ်ပေးရေး (350 μA,4ms, monophasic) တိုင်း5မိတစ်သျှူးမှလျှောက်ထားတစ်ခုတည်းလျှပ်စစ်သွေးခုန်နှုန်းအားဖြင့် evoked ခဲ့သည်။ Extracellular DA -0.4 V ကိုမှ + 1.2 ရန်တြိဂံ waveform (-0.4 လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် vs ag / AgCl, 400 V ကို / s နဲ့) ။ အဆိုပါ extracellular DA တုံ့ပြန်မှုတည်ငြိမ်ခဲ့ပြီးတာနဲ့ကိုကင်း (0.03-30 μmol / ဌ) ဦးနှောက်ကိုအချပ်မှတိုးပွားလာသောလျှောက်ထားခဲ့သည်။ DA kinetics နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအာနိသင်အကဲဖြတ်ဖို့, DA ၏အဆင့်ဆင့် Michaelis-Menten kinetics သုံးပြီးလုပ်ပါတယ်ခဲ့ကြသည် evoked ။ ကိုကင်းအာရုံစူးစိုက်မှု-တုံ့ပြန်မှုခါးဆစ်အဘို့, app ကို။ Kmယင်း DAT များအတွက်သိသာဆှဖှေဲ့တစ်ဦးအတိုင်းအရှည်, DA လွှာမှတားစီးဖို့ကိုကင်းများ၏စွမ်းရည်ပြောင်းလဲမှုများဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
တိရစ္ဆာန်များ၏သီးခြားအုပ်စု, တံခါးခုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် IntA-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တံခါးခုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်း IntA မတိုင်မီဖျော်ဖြေပြီးတော့နောက်တဖန် IntA ၏3ရက်ပေါင်းအောက်ပါသို့မဟုတ် IntA နှင့်3ရက်ကြာ abstinence ကာလ7ရက်ပေါင်းအောက်ပါခဲ့သည်။ တံခါးခုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ / ရှာခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုအားဖြည့်အကဲဖြတ်ဖို့အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တံခါးခုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတခု FR11 အချိန်ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ကြွက်များကိုကင်း (421, 237, 133, 75, 41, 24, 13, 7.5, 4.1, 2.4 နှင့် 1.3 μg / ဆေးထိုး) ၏ 1 ယူနစ်ဆေးများတစ်ဦးဆင်းစီးရီးမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်းပါဝင်ပါသည် အားဖြည့်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုထိုးသည့် 10-မိ session ကိုဖြတ်ပြီးဆက်တိုက်တင်ဆက်တစ်ခုချင်းစီကိုဘင်နှင့်အတူ, 110 မိဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ တိရစ္ဆာန်များ3ရက်ဆက်တိုက်အဘို့ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်အသုံးပြုတဲ့တန်ဖိုးများကိုရယူထားခြင်းမှပျမ်းမျှခဲ့သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးစီးပုံ 4a တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်တစ်ဦးအတွင်း-session ကိုထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေး, ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဆေးထိုးမြင့်မားသည်အခါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ကနဦး bins စဉ်အတွင်း, တိရစ္ဆာန်အနည်းငယ်သာတုံ့ပြန်အတူကင်းစားသုံးမှု၏တစ်ဦးဦးစားပေးအဆင့်အထိရရှိရန်တတ်နိုင်သည်။ ဆေးထိုး bins ဖြတ်ပြီးလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ဆေးထိုးကင်း၏ဦးစားပေးအဆင့်ဆင့်ထိန်းသိမ်းနှင့်လျှောက်လျော့နည်းတုံ့ပြန်မရနိုင်သည်ကိုလုံလောက်စွာအနိမ့်ဖြစ်လာချိန်အထိ, တိရစ္ဆာန်, တသမတ်တည်းစားသုံးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ရပေမည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဆေးထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေးဖြတ်ပြီးတုံ့ပြန်အတွက်ဆိုင်း, အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒအခြေခံမူကိုအသုံးပြုပြီးဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။
အမူအကျင့်ကစီးပွားရေးဆန်းစစ် (paid အကျယ်ချဲ့စျေးနှုန်း၏ parameters များကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်Pmax ကို) နှင့်တစ်ဦးအနည်းဆုံးအတားအဆီးစျေးနှုန်းမှာစားသုံးမှု (Q0), ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ (Oleson et al, 2011; Oleson နှင့်ရောဘတ်, 2009; Oleson နှင့်ရောဘတ်, 2012) ။ အတိုချုပ်, Pmax ကို နှင့် Q0 တန်ဖိုးများကိုဝယ်လိုအားမျဉ်းကွေးအား အသုံးပြု၍ သင်္ချာနည်းဖြင့်ဆင်းသက်လာသည်။ ၀ ယ်လိုအားကိုမျဉ်းဖြောင့်ဖြင့် အသုံးပြု၍ တိကျသောတိရိစ္ဆာန်များစားသုံးမှုမှထုတ်လုပ်သည့် ၀ ယ်လိုအားကိုထုတ်လုပ်သည်။Q) = မှတ်တမ်း (Q0)+k × (e-α × Q0 × C-1) (Hursh နှင့် Silberberg, 2008; Christensen et al, 2008) ။ ဒီညီမျှခြင်းများတွင် Pmax ကို -1 (= function ကို၏အရာမှာပထမဦးဆုံးဆင်းသက်လာအမှတ်လျှောစောက်သည့်ယူနစ်စျေးနှုန်းဖြစ်ဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ခဲ့သည်Hursh နှင့်တောင်ပံကစားသမား, 1995) ။ တန်ဖိုး k သော်လည်း, ရှိသမျှတိရစ္ဆာန်များအဘို့2ဟုသတ်မှတ်ခံခဲ့ရ Q0 နှင့် α, ပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးနှုန်းတုံ့ပြန်အတွက် function ကို၏အရှိန်ကိုကိုယ်စားပြု, အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်အောင်မြင်ရန်ခန့်မှန်းခဲ့ပြီးသော (Hursh နှင့် Silberberg, 2008; Christensen et al, 2008) ။ ဤဆောင်ရွက်ချက်များကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါသည်။
Q0: Q0 တိရိစ္ဆာန်များသည်ကိုကင်းသုံးစွဲမှု ဦး စားပေးအဆင့်ကိုတိုင်းတာသည်။ ဆေးပမာဏအလွန်များပြီးကိုကင်းအားအားစိုက်ထုတ်မှုနည်းသောအချိန်တွင်အနည်းဆုံးကန့်သတ်ထားသည့်စျေးနှုန်းများကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ ဤနှစ်သက်သောစားသုံးမှုအဆင့်ကိုတံခါးခုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏အစောပိုင်းအမှားအယွင်းများတွင်သတ်မှတ်သည်။
Pmax ကို: အတုံ့ပြန်မှုကိုကင်းများ၏ 1 မီလီဂရမ်ရရှိရန်ထုတ်လွှတ်အဖြစ်စျေးဆေးထိုးတံခါးခုံကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသီးအသီးဆက်တိုက်ဘင်, စျေးနှုန်းတိုးမြှင့်အတွက်ယုတ်လျော့နေသည်ဟူမူကားအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ အဲဒီ session တွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှတိရိစ္ဆာန်များတည်ငြိမ်စားသုံးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်ရန်အတွက်တက်ကြွစွာလီဗာအပေါ်တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ရပေမည်။ Pmax ကို တိရစ္ဆာန်မရှိတော့စားသုံးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အလုံအလောက်တုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါနှင့်စားသုံးမှုလျော့နည်းစေမှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မြင့်မားနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များ Pmax ကို ဝေးကွာဆေးထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေးသို့ကင်းအဆင့်ဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်တော်မူမည် တစ်နည်းအတွက်သူတို့ကိုကင်းများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ယခင်အလုပ်ကြောင်းသရုပ်ပြထားပါတယ် Pmax ကို အလွန်အမင်းခုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတိကျစွာ (ထိရောက်မှုအားဖြည့်အကဲဖြတ်ထားပါသည်ကြောင်းအတည်ပြု, အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်ချိုးအချက်များဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်Oleson et al, 2011).
K သည်တွက်ချက်i တန်ဖိုးများ
တားစီးရုံကလွဲပြီး (K သည်i) ကို linear အာရုံစူးစိုက်မှု-အကျိုးသက်ရောက်မှု profile များကိုကြံစည်ခြင်းနှင့် linear ဆုတ်ယုတ်၏ဆင်ခြေလျှောအဆုံးအဖြတ်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ K သည်i ညီမျှခြင်း K မှတွက်ချက်ခဲ့သည်m/ ဆင်ခြေလျှော။
ဇယား Pad Prism ကို (ဗားရှင်း 5,, La Jolla, CA, USA) ကစာရင်းအင်းဒေတာအစုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဂရပ်များကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင် data ကို SEM နှင့်ရာခိုင်နှုန်း±ယုတ်အဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်။ baseline voltammetry အချက်အလက်များနှင့် K သည်i တန်ဖိုးများကိုကှဲလှဲ၏တစ်လမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANOVA) ကို အသုံးပြု. နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ အဓိကသက်ရောက်မှုရယူကြသောအခါ (P<0.05), အုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခု Tukey သုံးပြီးစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည် post ကို hoc စမ်းသပ်။ ကိုကင်းများ၏ perfusion ပြီးနောက်ရရှိသောဖြန့်ချိအချက်အလက်များနှင့်ဒေတာအချက်များအဖြစ်စမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးနှစ်ဦး-လမ်း ANOVA အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ အုပ်စုများအကြားကွာခြားချက်များတစ် Bonferroni သုံးပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြ post ကို hoc စမ်းသပ်။ နှစ်ဦးစလုံး App ကတိုင်းတာအဖြစ်ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ကိုကင်းအာနိသင်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရှေ့မှောက်၌ DA လွှတ်ရာအသင်းအဖွဲ့အကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ K သည်m နှင့်ငွေကျပ်i။ Pearson ၏ဆက်နွယ်မှုကိန်းများကိုဆက်စပ်မှု၏အားကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Pmax ကို နှင့် Q0 တန်ဖိုးများကိုကြိုတင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခဲ့ပြီး၊ IntA ကိုတွဲတွဲထားသောကျောင်းသားများ သုံး၍ နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် t-test ။ အားလုံး p<0.05 ၏တန်ဖိုးများကိုစာရင်းအင်းသိသိသာသာဖြစ်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
တိုးမြှင့်စိတ်ကြွဆေး DA ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် Vmax ကို 3-Day ကို IntA အောက်ပါတစ်ခု Abstinence ကာလအားဖြင့်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း
ANOVA စိတ်ကြွဆေး DA လွှတ်ပေးရေး (F ကိုအပေါ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုညွှန်ပြတစ်ဦးကတဦးတည်း-လမ်း3, 27= 6.17, p<0.01; ပုံ 1a) ။ ဖြန့်ချိသိသိသာသာ 1 သို့မဟုတ်3IntA ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးရက်, Tukey အောက်ပါခြီးမွှောကျမခံခဲ့ရပေမယ့် post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစိတ်ကြွဆေးလွှတ်ပေးရန်ထိန်းချုပ်မှု (နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကတစ်ဦး3ရက်ကြာ abstinence ကာလနှင့်အတူတစ်ဦး7ရက်ကြာ IntA အောက်ပါခြီးမွှောကျခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါq= 5.24, p<0.01), IntA ၏ 1 ရက် (q= 4.99, p<0.01) နှင့် IntA ၏3ရက် (q= 4.16, p
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို (IntA) ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး presynaptic dopamine system ကို kinetics ပွောငျးလဲ။ (က) dopamine အုပ်စုများအကြားμMအတွက် (DA) လွှတ်ပေးရန်နှိုးဆွ။ တိရစ္ဆာန်များ 1 သို့မဟုတ်3နေ့ရက်ကာလအဘို့ IntA ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုခံယူ။ တဦးတည်းအုပ်စုတစ်စုပေးထားခဲ့သည် ...
ANOVA အပေါ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုညွှန်ပြတစ်ဦးကတဦးတည်း-လမ်း Vmax ကို (F3, 27= 11.24, p<0.0001; ပုံ 1b) ။ Tukey post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလွှာမှ၏အကျယ်ချဲ့မှုနှုန်းထိန်းချုပ်မှု (နှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်3ရက်ကြာ IntA အုပ်စုသို့ခြီးမွှောကျခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါq= 4.85, p<0.05) နှင့် IntA ၏ 1 ရက် (q= 4.31, p<0.05) ။ ထို့အပြင် (၃) ရက်ကြာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရချိန်မှ (၇) ရက်အကြားရှောင်ကြဉ်မှုသည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုများပြားလာသည်။q= 6.83, p<0.001) နှင့် IntA ၏ 1 ရက် (q= 6.37, p<0.001), သို့သော်, စားသုံးခြင်းမရှိ abstinence ကာလရှိခဲ့ကြောင်း3ရက်ကြာ Self- အုပ်ချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားဘူး
တိုးမြှင့်ကင်းအာနိသင်အောက်ပါ 3-Day ကို IntA နောက်ထပ်တစ် 7-Day ကို Abstinence ကာလအားဖြင့်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်
ANOVA ကင်းအာနိသင် (F ကိုအပေါ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်းတစ်ဦးအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှားတစ်ဦးက Two-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ4, 100= 12.68, p<0.001; ပုံ 2a) ။ 1 ရက်ကြာ IntA နှင့်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် Bonferroni ရှိ၏ပေမယ့် post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ထို3μMမှာထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက 10 ရက်ကြာ IntA ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်ကင်းအာနိသင်မှုကြောင့်ထင်ရှားt= 2.93, p<0.05) နှင့် 30 μM (t= 5.54, p<0.001) ပြင်းအား။ ထို့အပြင် ၃ ရက်ကြာ IntA ကိုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည် ၁၀ မီလီဂရမ်ရှိ ၁ ရက် Inta တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုကင်းစွမ်းအားကိုတိုးစေခဲ့သည်။t= 3.53, p<0.01) နှင့် 30 μM (t= 6.11, p<0.001) ပြင်းအား။ ၃ ရက် IntA ကိုကင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုခံယူခဲ့သည့်သတ္တ ၀ ါများနှင့် ၇ ရက်ကြာရက်ရက်စက်စက်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် ၁၀ μμMရှိထိန်းချုပ်ထားသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုကင်းအာနိသင်တိုးပွားစေခဲ့သည် (t= 4.60, p<0.001) နှင့် 30 μM (t= 11.44, p<0.001) ပြင်းအား; 1 μMမှာ 10 ရက် IntA တိရိစ္ဆာန်များ (t= 4.39, p<0.001) နှင့် 30 μM (t= 10.64, p<0.001) ပြင်းအား; နှင့်3μMမှာ 30 ရက်ကြာ IntA တိရိစ္ဆာန်များ (t= 5.35, p<0.001) အာရုံစူးစိုက်မှု။
ကိုကင်းများ၏ neurochemical သက်ရောက်မှုထိခိုက်မခံတဲ့အတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို (IntA) Self-အုပ်ချုပ်ရေးရလဒ်များကို။ (က) နျူကလိယ်ချပ်အတွက်တိုးပွားလာသောကိုကင်း (0.3-30 μM) ထိုး-တုံ့ပြန်မှုခါးဆစ် core ကို accumbens ။ ကိုကင်း ...
Ki လွှာမှယင်း၏ uninhibited တန်ဖိုး% 50 မှလျော့နည်းစေသောမူးယစ်ဆေးအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုအတိုင်းအတာရှိ၏ K သည်အတွက်, အရှင်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းi တိုးမြှင့်အာနိသင်၏ညွှန်ပြဖြစ်ပါသည်။ ANOVA K သည်ပေါ်အုပ်စုတစ်ခုသိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှားတစ်ဦးကတဦးတည်း-လမ်းi (F3, 28= 13.96, p<0.0001; ပုံ 2b) ။ Tukey post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာငွေကျပ်ကြောင်းထင်ရှားi ထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုးအဆိုပါ3ရက်ကြာ IntA အုပ်စုသည် (ထဲမှာလျှော့ချခဲ့သည်q= 5.58, p<0.01) နှင့် 1 ရက် IntA (q= 4.18, p<0.05) ။ ၇ ရက်တာ abstinence ကာလသည် K ကိုပိုမိုကျဆင်းစေခဲ့သည်i (ထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုးq= 8.09, p<0.001) နှင့် 1 ရက် IntA (q= 6.88, p
DA သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင်တိုး IntA နှင့် Abstinence အောက်ပါ Enhanced နေကြတယ်
IntA နှင့် abstinence အောက်ပါ DAT မှာတိုက်ရိုက်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုအဆုံးအဖြတ်အပြင်, ကျနော်တို့ကိုလည်း NAc core ကိုအတွက်စိတ်ကြွဆေး DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်တိုးအပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ ANOVA စိတ်ကြွဆေး DA လွှတ်ပေးရေး (F ကိုအပေါ်ကိုကင်းအာရုံစူးစိုက်မှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှားတစ်ဦးက Two-လမ်း5, 26= 38.31, p<0.001; ပုံ 3a) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စိတ်ကြွဆေး DA လွှတ်ပေးရေးအပေါ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်းတစ်ဦးအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F ကိုရှိခဲ့သည်3, 26= 7.19, p<0.001) ။ Bonferroni post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ထို 0.3 မှာ IntA ပေါင်း abstinence အောက်ပါ DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်တိုးအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးထင်ရှားp<0.001), 1 (p<0.001),3(p<0.001) နှင့် 10 μM (pထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက <0.001) ပြင်းအား။ ထို့အပြင်အင်တာ ၁ ရက်ကြာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ၀.၃ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက IntA plus abstinence အပြီးတွင်ကိုကင်းသွေးသွင်း DA ထုတ်လွှတ်မှုတိုးလာသည်။p<0.05), 1 (p<0.01),3(p<0.05) နှင့် 10 μM (p<0.05) ပြင်းအား။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၃ ရက်ကြာ IntA ကို ၀.၃ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက IntA plus abstinence အပြီးတွင်ကိုကင်းသွေးသွင်း DA ထုတ်လွှတ်မှုတိုးလာသည်။p<0.05), 1 (p<0.01) နှင့်3μM (p<0.01) ပြင်းအား။ ထို့အပြင်သိသာထင်ရှားသောအာရုံစူးစိုက်မှု - Self- အုပ်ချုပ်မှုအပြန်အလှန် (F15, 26= 7.19, p
မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် dopamine (DA) လွှတ်ပေးရန်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို (IntA) နှင့် abstinence အောက်ပါတိုးမြှင့်ထားသည်။ (က) စိတ်ကြွဆေး DA လွှတ်ပေးရန်, ထိန်းချုပ်မှုအားလုံးကိုကင်းပြင်းအားကိုဖြတ်ပြီးတိုင်းတာ, 1 ရက်ကြာ IntA,3ရက်ကြာ IntA နှင့်3ရက်ကြာ IntA တစ်7ရက်ကြာ abstinence ကာလနှင့်အတူ။ ...
စိတ်ကြွဆေးလွှတ်ပေးရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုသည့် DAT မှာကင်းအာနိသင်အတွက် IntA-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုမောင်းနှင်ကြသည်မဟုတ်, ငါတို့ K သည်နှင့်အတူကင်း၏ရှေ့တော်၌စိတ်ကြွဆေး DA လွှတ်ပေးရန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်i (ပုံ 3b) ။ ကျနော်တို့ကိုကင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌စိတ်ကြွဆေးလွှတ်ပေးရန်လွှာမှတားစီး (ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူမပတျသကျဘူးကြောင်းတွေ့ရှိရ r= -0.48, NS, IntA 1 နေ့, r= -0.55, NS, IntA3ရက်, r= 0.07, NS, ချွတ် IntA7ရက်, r= 0.06, NS), evoked လွှတ်ရာပြင်းအားလွှာမှတားစီးနှင့်နှစ်ဦးကိုတကယ်တော့သီးခြားဖြစ်ရပ်၌နေသောသြဇာလွှမ်းမိုးတဲ့သိသာထင်ရှားသောအချက်မပေးကြောင်းညွှန်ပြ။
IntA အောက်ပါကင်း၏တိုးမြှင့်အားဖြည့်ထိရောက်မှုတစ် 7-Day ကို Abstinence ကာလပြီးနောက်လုပ်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်
ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ထိရောက်မှုအပေါ် IntA-သွေးဆောင်အဆိုပါ DA စနစ်၏အာရုံခံစားမှုနှင့်ကိုကင်းအာနိသင်များ၏သက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်, တိရစ္ဆာန်များ၏သီးခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ချိန်ကတုံ့ပြန်ကင်း (များ၏ဝယ်ယူအောက်ပါနှစ်ခုအချိန်အချက်များမှာတံခါးခုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေပုံ 4aတစ်ဦးတည်း IntA ၏3ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ် IntA ပေါင်းတစ်3ရက်ကြာ abstinence ကာလ (၏7ရက်ပေါင်းဖြစ်စေအောက်ပါတဖန်လက်ဝဲ panel က, ကိုယ်စားလှယ်တိရိစ္ဆာန်) နှင့်ပုံ 4a, ညာ panel ကို, ကိုယ်စားလှယ်တိရိစ္ဆာန်) ။ သုံးရက်ကြာ IntA အုပ်စုတွင်ကျောင်းသား၏ t-test အတွက်သိသိသာသာတိုးထင်ရှား Pmax ကို (အခြေခံနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက IntA postt9= 2.21, p<0.05; ပုံ 4b), IntA ကိုကင်း၏အားဖြည့်ထိရောက်မှုတိုးပွါးကြောင်းညွှန်ပြ။ အလားတူပဲကျောင်းသားတစ် ဦး ရဲ့ t-test အတွက်သိသိသာသာတိုးထင်ရှား Pmax ကို IntA ပေါင်းတစ်3ရက်ကြာ abstinence ကာလ (t ၏အောက်ပါ7ရက်ပေါင်း6= 3.11, p<0.05; ပုံ 4c) ။ ထို့အပြင်ကျောင်းသားတစ် ဦး ရဲ့ t-test အတွက်တိုးလာကြောင်းထင်ရှား Pmax ကို (ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ထိရောက်မှုအတွက် IntA-သွေးဆောင်တိုးတစ်ခု abstinence ကာလအတွင်းတိုးပွားကြောင်းညွှန်ပြခြင်း,7ရက်ကြာ abstinence အုပ်စုတွင်သိသာထင်ရှားစွာကြီးt15= 2.25, p<0.05; ပုံ 4d).
ကိုကင်းအားဖြည့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို (IntA) ကလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ် abstinence နေဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။3ရက်ကြာ IntA နှင့် 3-နေ့၌ abstinence ၏ IntA ပေါင်း7ကာလ၏ဆိုးကျိုးများ Pmax ကို (ခ-ဃ) နှင့်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုဟာအနည်းဆုံးအတားအဆီးစျေးနှုန်းမှာ (Q0; E-ဂရမ်) ...
ကိုကင်းစားသုံးမှု IntA နှင့် Abstinence အောက်ပါလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်
ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ထိရောက်မှုအဆုံးအဖြတ်အပြင်, တံခါးခုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလည်းအစီအမံ Q0, စားသုံးမှု၏အတိုင်းအတာ။ အဆိုပါ3ရက်ကြာ IntA အုပ်စုထဲမှာမပါအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည် Q0 (ပုံ 4e), IntA တိုးပွါးသော်လည်းကြောင်းညွှန်ပြ Pmax ကို၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်စားသုံးရမည့် ဦး စားပေးဆေးကိုမပြောင်းလဲပါ။ ပြောင်းပြန်ကျောင်းသားတစ် ဦး ရဲ့ t-test အတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းထင်ရှား Q0 (t6= 3.80, p<0.01; ပုံ 4f) IntA ပေါင်းတစ်3ရက်ကြာ abstinence ကာလ7ရက်ပေါင်းအောက်ပါ။ တစ်ဦးကကြားက-အုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦး7ရက်ကြာ abstinence ကာလပေးခဲ့သောတိရိစ္ဆာန်များအတွက် သာ. ကြီးမြတ်လျှော့ချရေးပြထင်ရှား Q0 အဘယ်သူမျှမ abstinence နှင့်အတူ IntA တိရိစ္ဆာန်များထက် (t13= 1.78, p<0.05; ပုံ 4g) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းပါးသောအချိန်တွင်ရရှိနိုင်ပါကတိရစ္ဆာန်များသည် ဦး နှောက်ကိုကိန်းဓာတ်ပါဝင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးဒြပ်ပေါင်း၏ပုဂ္ဂလဒိeffects္ by အကျိုးသက်ရောက်မှုများကဆုံးဖြတ်နိုင်သည်ဟုယခင်ကပြသခဲ့သည်။ ကိုကင်း၏ပုဂ္ဂလဓိeffects္ဌာန်ကျကျသက်ရောက်မှုများသည် DA စနစ်အပေါ် မူတည်၍ DA neurotransmission အပေါ်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုကိုအသိမှတ်ပြုခြင်းသည်တိရိစ္ဆာန်များကိုအဆင့်နိမ့်သောနေရာတွင် titrate ဖြစ်စေသည်။
အတူတူအဲဒီဒေတာ IntA ဟာအားဖြည့်နှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆျောမှုနှင့် ပတ်သက်. ထဲမှာကိုကင်းများ၏ဂုဏ်သတ္တိများအဖြစ်စားသုံးမှုပွောငျးလဲ, ဤသက်ရောက်မှု၏ပြင်းအားတစ်ဆုတ်ခွာကာလအားဖြင့်တိုးမြှင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဒီလေ့လာမှုက DA စနစ်က function ကိုဒါပေမယ့်လည်းအာနိသင်နှင့်ကိုကင်းများ၏ထိရောက်မှုအားဖြည့်မသာကိုထိခိုက်စေသည်ဟုကွဲပြား neurochemical ပွောငျးလဲအတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးရလဒ်များကိုကြောင်းပြသသည်။ (ရှိပါတယ်တုံ့ပြန်အပြစ်ပေး, တင်းမာမှုလျှော့ချခြင်းအပါအဝင်လူ့စွဲရောဂါဗေဒနှင့်အတူကြွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး align လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်အလုပ်အများကြီးဖြစ်ခဲ့နှင့်မျိုးသုဉ်း / reinstatement / relapse Paradigm ထားပါတယ်Ahmed ကနှင့် Koob, 1999, 1998; Jonkman et al, 2012; Shaham et al, 2003) ။ တစ်ဦး translationally သက်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်အစားထိုးယန္တရားများ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆုတ်ခွာ၏ပုံစံနှစ်ခုလုံးကိုအပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုနေကြအဖြစ်ဤတွင်ငါတို့သည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် abstinence ကာလ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစား၏ယာယီပရိုဖိုင်း၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ကြွက်မော်ဒယ်များလူ့မူးယစ်ဆေးစွဲအပေါငျးတို့သရှုထောင့်ပတ်ဝိုင်းမပေးနိုငျသောကွောငျ့, ကတိကျစွာအဆိုပါဖြစ်စဉ်များ၏ discrete ရှုထောင့်ပုံစံကြောင့်မော်ဒယ်များကိုရွေးဖို့အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပုံစံများလူ့စားသုံးမှုပုံစံများဝိသေသဖြစ်ကြောင်းနှင့် IntA မော်ဒယ်လူ့စွဲဖြစ်စဉ်ကိုအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းထိခိုက်မခံတဲ့အပေါ်ကဆက်ပြောပါတယ်လေ့လာမှုများများအတွက်ဝတ္ထုပါရာဒိုင်းပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်အလုပ်နှင့်လက်ရှိလက်ခံထားသောကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံများတွင်များစွာသောစားသုံးမှုသည်တိရစ္ဆာန်များ၏စားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုစားသုံးမှုသည်အာရုံကြောဓာတုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလူ့ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှု၏ပုံစံကိုပိုမိုတိကျစွာမော်ဒယ်လ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ပြသခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြပါသည်။ ခိုင်ခံ့သောအာရုံကြောဓာတုအကျိုးသက်ရောက်မှုများမြင့်မားစေရန်စဉ်ဆက်မပြတ်စားသုံးရန်မလိုအပ်ပါ။ လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည့် DAT တွင်ကိုကင်းအာနိသင်များကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းသည်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုကိုတိုးချဲ့အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကောင်းမွန်စွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောကျဆင်းမှုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည် (Hurd et al, 1989; ကူးတို့ et al, 2011, 2012, 2013a, 2013b; Calipari et al, 2013c, 2013d; Calipari et al, 2014a) နှင့်ကိုကင်းအကျဉ်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှုအောက်ပါ NAc core ကိုအတွက် DA မြှမှာပိုပြီးထိရောက်ဖြစ်တယ်, တစ်ဦး abstinence ကာလသက်ရောက်မှုတိုးပွါးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါ NAc core ကို (abstinence ၏ကာလပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ၏ reinstatement အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်Millan et al, 2011), နှင့်ဤဒေသတွင်ကိုကင်းအာနိသင်အလားအလာ compulsive သို့မဟုတ်စွဲလမ်းကဲ့သို့ကင်းစားသုံးမှု၏ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှဦးဆောင်တိုးလာကြိုးများနှင့်ကင်း၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အမှန်မှာကျနော်တို့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းဖို့လှုံ့ဆျောမှုသိသိသာသာ IntA အောက်ပါတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသပါ။ ထို့ကွောငျ့ထောအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲလမ်းသို့အကူးအပြောင်းကိုအားပေးအားမြှောက်တဲ့ sensitized ကင်းတုံ့ပြန်သောလူသားမြားရလဒ်များကိုအတွက်ကင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လူသားများသည်ကိုကင်းကိုတည်ငြိမ်သောအဆင့်များထိန်းသိမ်းထားခြင်းထက်ကိုးကူပြတ်တောင်းသောပုံစံဖြင့်စီမံကွပ်ကဲသည်။ အလားတူပုံစံဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်အခါကိုကင်း၏သက်ရောက်မှု၏အာရုံကြောနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းအကျိုးဆက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်အရေးကြီးပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် (Beveridge et al, 2012) ။ Self-အုပ်ချုပ်ရေး Paradigm သုံးပြီးကင်းစွဲ၏ရိုးရာ Pre-လက်တွေ့မော်ဒယ်များနေ့ရက်များစွာကျော်ကင်းရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲနိုင်အပေါ်အားကိုး။ ရှည်လျားသော-access ကိုစဉ်အတွင်းစက်လှေကား (LgA) Self-အုပ်ချုပ်ရေးတာရှည်စွဲဖို့အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေ switch ကိုပုံစံ postulated ခဲ့ပြီး (Koob နှင့် Le Moal, 1997) ။ သို့သော် LgA နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ကင်းစားသုံးမှုတိကျစွာလူ့စားသုံးမှုပုံစံများပုံစံမည်မဟုတ်ပါနှင့် IntA (နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက, ဆန့်ကျင်ဘက် neurochemical အကျိုးဆက်များကိုထုတ်လုပ်Calipari et al, 2013a) ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ Inta သည်စားသုံးမှုနှုန်းနှင့် DAT ကိုတားစီးနိုင်သည့်ကိုကင်းစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် ၃ ရက်မျှသာလုံလောက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ Inta သည်ကိုကင်း၏အားဖြည့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကိုကင်းကိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းသည်နောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ဤတွေ့ရှိချက်သည် ၇ ရက်ကြာဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကိုကင်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် တွဲဖက်၍ IntA နှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးနောက်တွင်ယေဘူယျအားဖြင့်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုထိရောက်သောအရာဟုဖော်ပြသည်။ NAc တွင်ကိုကင်းသည်ပိုမိုအားကောင်းလာခြင်းကြောင့် Inta ပြီးနောက်ကိုကင်း၏ပိုမိုအားဖြည့်ထိရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တကယ်တော့ဒီနေရာမှာကိုကာကိုလာအာနိသင်တိုးပွားလာတဲ့အချိန်မှာပြသနိုင်တာကိုပြသထားတယ်။ Pmax ကို, ထိရောက်မှုအားဖြည့်တဲ့အတိုင်းအတာကိုလည်းတိုးမြှင့်ထားသည်။ ထို့ပြင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်မူးယစ်ဆေးရရှိရန်သုံးစွဲဆန္ဒရှိသောကွောငျ့ (Pmax ကို) ရုပ်သိမ်းရေးစဉ်အတွင်းတိုးပွါး, ထိုအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် abstinence ၏တိုးချဲ့ကာလအောက်ပါ relapse အတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိနိုင်ပါသည်။
(relapse ဖို့ကိစ်စတှငျအချိန်ကြာရှည်စွာကျော်ကင်းထောက်က high-level ကိုအသုံးပြုမှုကိုမကြာခဏကင်းစွဲလေ့လာမထားဘူး, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲ, ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုထပ်ခါတလဲလဲကာလအကြားကင်းအသုံးပြုသူများသည်သံသရာ abstinence နှင့် relapse အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်Cohen ကိုနှင့် SAS, 1994) ။ ဤသည်အသုံးပြုမှုပုံစံဆုတ်ခွာကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်အာရုံကြောဓာတုအပြောင်းအလဲများကိုနားလည်သဘောပေါက်၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ၇ ရက်ကြာရက်ရက်စက်စက်သောက်သုံးမှုဖြင့်နောက်ဆက်တွဲ IntA နောက်ဆက်တွဲထွက်ပေါ်လာသည့် DA ထုတ်လွှတ်မှု DA (D) တွင်ကိုကင်း (၂) ကိုကင်းစွမ်းအားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် (၃) ကိုကင်း၏အားဖြည့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို (၁) ပိုမိုထိရောက်မှုရှိစေခဲ့သည်။ ။ eva DA ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုများနှစ်ခုအစီအမံများအကြားဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းအားဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ်, လွှာမှတားစီးအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်သောကြဘူး။ DA ဖြန့်ချိမှုမှာကိုကင်းကသွေးဆောင်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုယခင်က synapsin-dependant ယန္တရားမှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ DAT ကိုတားဆီးနိုင်သည့်ကိုကင်း၏စွမ်းရည်နှင့်မသက်ဆိုင် (Venton et al, 2006) ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ IntA သည် DAT အပေါ်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုများအပြင် exocytotic DA ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ကိုကင်း - သွေးဆောင်လွှတ်ပေးမှုနှင့်တိုးမြှင့်စားသုံးမှုတားစီးမှုနှစ်ခုလုံးကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု ပြုလုပ်၍ DA အဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကိုကင်းကိုစီမံရန်တိုးမြှင့်သောစေ့ဆော်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းပြသသည်။ ။ ကိုကင်း၏အာရုံကြောဓာတုဗေဒနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများအပေါ်ရုပ်သိမ်းခြင်းကာလ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်များစွာသောလူတို့နှင့်ကိုက်ညီသည် Vivo အတွက် microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ဆုတ်ခွာ / abstinence ကာလနဲ့စမ်းသပ်-ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကင်းာင်း Paradigm သရုပ်ပြလေ့လာမှုများ, (တိုးလာလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ကင်း-သွေးဆောင် DA လျတ်မှုKalivas နှင့် Duffy, 1993; Parsons နှင့်တရားမျှတရေး, 1993; Robinson နဲ့ Becker က, 1982; ရော်ဘင်ဆင် et al, 1988) ။ နောက်ထပ်ကျနော်တို့ IntA နှင့်ဆုတ်ခွာအောက်ပါကင်းအားဖြည့်ထားတဲ့တိုးမြှင့်လေ့လာတွေ့ရှိ, ထိုသို့ evoked DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်ကင်းအာနိသင်နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင်တိုးအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဆုတ်ခွာအောက်ပါကင်းနှင့် relapse ၏တိုးမြှင့်အားဖြည့်သက်ရောက်မှုမောင်းထုတ်ရန်ဆုံစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။
(လူသားတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသမိုင်းမူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုအားဖြင့် ventral striatum ပိုမို activation နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ postulated သည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများ၏ကြာချိန်အပြုသဘော activation ၏ပြင်းအားဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်Prisciandaro et al, 2014) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ IntA ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏3ရက်ကြာသမိုင်းအောက်ပါ, DA လွှတ်ပေးရန်မပြောင်းလဲခဲ့ evoked ဖော်ပြသည်။ သို့သော်တစ်ဦး7ရက်ကြာ abstinence ကာလ IntA လုပ်ခဲ့ပြီးအတွက်ရလဒ်ပြီးနောက်ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါက, ကင်း၏မရှိခြင်းအတွက်, DA လွှတ်ပေးရန်နှိုးဆွ။ အဆိုပါတိုးမြှင့် DA လွှတ်ပေးရန် phasic အချက်ပြဖြစ်ရပ်များကာလအတွင်းလွတ်မြောက်ရေးအတွက်မြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါအရာဖြန့်ချိ DA ရေကူးကန်ထဲမှာတိုးဖို့ညွှန်ပြနိုင်ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ပစ်ခတ် phasic DA အာရုံခံဆဲလျစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်ဖြန့်ချိ (တိုးမြှင့် cue-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များမှဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့် abstinence ၏ကာလကိုအောက်ပါ relapse လွယ်ကူချောမွေ့နိုင်Ostlund et al, 2014).
ဤလုပ်ငန်းကိုလူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏တိကျသောရှုထောင့်အဘို့ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာနဲ့ဘာသာပြန်မော်ဒယ်များရွေးချယ်ရာတွင်၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ LgA လူသားတွေအတွက်နာတာရှည်မိုးသည်းထန်စွာကင်းစားသုံးမှုပြီးနောက်ဖွံ့ဖြိုးသောသည်းခံစိတ်များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့မော်ဒယ်အဖြစ်အစေခံ, IntA ပိုကောင်းမော်ဒယ်များမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုစိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးရရှိနိုင်မှုခန့်မှန်းတွေကိုထိခိုက်မခံတဲ့တုံ့ပြန်မှုမှထိခိုက်လွယ်နိုင်ပေမဲ့။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီဒေတာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနဲ့ဆုတ်ခွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ neurochemical နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များအဆုံးအဖြတ်အတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍများကဖော်ပြသည်။ ဒါဟာ (တစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပုံစံထဲမှာမူးယစ်ဆေးစီမံခန့်ခွဲရန်တစ်ဦးချင်းစီဦးတည်သွားစေခြင်းငှါအရာလူသားများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကန့်သတ်ရရှိနိုင်၏အခြေအနေများအောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်Ahmed က et al, 2013), နှင့်ရရှိနိုင်လူ့စာပေ, ဤအခိုင်အမာထောက်ခံပါသည်။ နောက်ထပ်လူသားများအတွက်ကိုကင်းများ၏ neurochemical နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအောက်ပါနှစ်ပေါင်းအထိကြာရှည်စွာ, များအတွက် sensitized နေကြပြီး, လှုံ့ဆော်စွဲ၏ဝိသေသဖြစ်ကြောင်း relapse နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေး၏ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသံသရာမောင်းထုတ်ရန်စဉ်းစားနေကြPrisciandaro et al, 2014) ။ ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် abstinence ကာလ၏ယာယီပရိုဖိုင်းကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး၏ neurochemical နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များအပေါ်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိသည်ကြောင့်ထို့ကြောင့်, ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုမော်ဒယ်များတိကျစွာလူ့ကိုကင်းစွဲနေဖြင့်အကောင့်သို့ကင်းအုပ်ချုပ်ရေး၏ပုံစံများကိုယူကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ အတူတူ, လူ့ဒေတာကြောင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, သတိထားရနှင့် abstinence နှင့် relapse ၏ကာလကိုအများဆုံး translationally သက်ဆိုင်ရာ Pre-လက်တွေ့မော်ဒယ်များများ၏သံန္နိဌာန်တွင်ဤရှုထောင့်ဖို့စဉ်းစား၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်း, စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှေ့ဆက်ဖို့ဆုံဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဤလုပ်ငန်းကို NIH ထောက်ပံ့ငွေ R01 DA024095, R01 DA030161, R01 DA014030, P50 DA006634 (SRJ), T32 DA007246 နှင့် F31 DA031533 (ESC), နှင့် T32 AA007565 (CAS) ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာအကျိုးစီးပွားမျှပဋိပက္ခကြေညာ။
Ahmed က SH, Koob gf ။ ကြွက်များတွင်တင်းမာမှုလျှော့ချပြီးနောက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက် set ကိုအမှတ်အတွက်ကြာရှည်တိုး။ Psychopharmacology (Berl) 1999; 146: 303-312 ။ [PubMed]
Ahmed က SH, Lenoir M က, ရှေးခယျြမှုမရှိခြင်းတို့ကမောင်းနှင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှိုင်းယှဉ်စွဲ၏ Guillem K. Neurobiology ။ Curr Opin Neurobiol ။ 2013; 23: 581-587 ။ [PubMed]
Beveridge TJR, Wray P ကို, ဘရူတစ်ဦးက, Shapiro B, Mahoney JJ နယူတန် TF ။ တိရိစ္ဆာန်စွဲမော်ဒယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအသိပေးမှလူ့ကင်းအသုံးပြုမှုပုံစံများလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။ မူးယစ်ဆေးမူတည်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး၏ပြဿနာများအပေါ်ကောလိပ်များအတွက်စိတ္တဇထုတ်ဝေသည်။ Palm Springs,, CA; 2012 ။
Bouayad-Gervais K ကို Minogianis EA ၏, Lévesque: D, Samaha AN ။ လျှင်မြန်စွာကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကင်း၏ 2014The Self-အုပ်ချုပ်ရေးမူးယစ်ဆေးယူတိုးချဲ့လှုံ့ဆျောမှုအားပေးအားမြှောက်: အော်ပရေတာများ၏ကြိုတင်အဆင့်ဆင့်၏ပံ့ပိုးမှုများကို (စာနယ်ဇင်းအတွက်) တုံ့ပြန်နှင့်ကိုကင်းစားသုံးမှု Psychopharmacology (Berl) ။ [PubMed]
Calipari ES, Beveridge တီဂျေ, ဂျုံးစ် SR, Porrino LJ ။ တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ limbic ဦးနှောက်ဒေသအလုပ်လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအတွင်း persistent လျှောက်လျော့နည်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2013; 38: 3749-3757 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Calipari ES, ကူးတို့ MJ, caron MG, ရောဘတ်, DC, ဂျုံးစ် SR ။ Methylphenidate Self-အုပ်ချုပ်ရေးအဆိုပါအာနိသင်တိုးပွါးပြီး dopamine Transporter ယန္တရားမှတဆင့်ဖြန့်ချိ၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်။ နတ် Community ။ 2013; 4: 2720 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Calipari ES, ကူးတို့ MJ, Melchior JR, Bermejo K ကို Salahpour တစ်ဦးက, ရောဘတ်, DC, et al ။ Methylphenidate နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကွဲပြား dopamine terminal ကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ရန်။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2014; 19: 145 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Calipari ES, ကူးတို့ MJ, Roberts သည် DCS, ဂျုံးစ် SR ။ အဆိုပါ dopamine-မြှနှင့်ကိုကင်းများ၏ locomotor-လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုမှသည်းခံစိတ်အတွက်လက်လှမ်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးရလဒ်များကိုတိုးချဲ့။ J ကို Neurochem ။ 2013; 128: 224-232 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Calipari ES, ကူးတို့ MJ, Siciliano, CA, ဂျုံးစ် SR ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် dopamine Transporter မှာလှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှု၏ာင်းထုတ်လုပ်သည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2014; 349: 192-198 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Calipari ES, ကူးတို့ MJ, Zimmer BA, Roberts သည် DCS, ဂျုံးစ် SR ။ ကိုကင်းစားသုံးမှု၏ယာယီပုံစံဟာ dopamine Transporter မှာကင်းသက်ရောက်မှု၏ာင်းနှိုင်းယှဉ်သည်းခံစိတ်ဆုံးဖြတ်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2013; 38: 2385-2392 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Christensen ကို C, Silberberg တစ်ဦးက, Hursh S က, Huntsberry M က, ကြွက်များတွင်ကင်းခြင်းနှင့်အစားအစာ Riley အေမရှိမဖြစ်တန်ဖိုးကို: ဝယ်လိုအား၏အဆမော်ဒယ်၏စမ်းသပ်မှု။ Psychopharmacology ။ 2008; 198: 221-229 ။ [PubMed]
Cohen ကိုပေတရု, SAS Arjan ။ nondeviant ယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင်အမ်စတာဒမ်အတွက်ကင်းအသုံးပြုခြင်း။ စှဲလမျးသူ Res ။ 1994; 2: 71-94 ။
ကူးတို့ MJ, Calipari ES, Mateo Y ကို, Melchior JR, ရောဘတ်, DC, ဂျုံးစ် SR ။ differential ကို dopamine Transporter blockers များ၏အာနိသင်အပေါ်သက်ရောက်မှု, ဖြန့်ချိခြင်း, methylphenidate: ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး pharmacodynamic သည်းခံစိတ်ထုတ်လုပ်သည်။ Neuropsychopharm ။ 2012; 37: 1708-1716 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကူးတို့ MJ, Calipari ES, Melchior JR, ရောဘတ်, DC, Espana RA, ဂျုံးစ် SR ။ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲ-ကျရောက်နေတဲ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကနဦး supersensitivity ပြီးနောက်ကင်းမှဝိရောဓိသည်းခံစိတ်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2013; 38: 2628-2636 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကူးတို့ MJ, Calipari ES, Yorgason JT, ဂျုံးစ် SR ။ ရှုပ်ထွေးစည်းမျဉ်းများနှင့်ဦးနှောက်အချပ်အတွက် voltammetry သုံးပြီး dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်လွှာမှ၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် plasticity ဆန်းစစ်ပါ။ ACS Chem neuroscience ။ 2013; 4: 693-703 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကူးတို့ MJ, Mateo Y ကို, ရောဘတ်, DC, ဂျုံးစ် SR ။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးကထုတ်လုပ်နဂိုအတိုင်းအလွှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူကင်း-အာရုံမခံစားနိုင်သော dopamine ပို့ဆောင်ရေး။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011; 69: 201-207 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hurd YL, Weiss က F, Koob gf ၎င်း, NE, Ungerstedt U. ကင်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ကြွက်နျူကလိယ accumbens-တစ်ဦးအတွက် extracellular dopamine လျတ် Vivo အတွက် Microdialysis လေ့လာပါ။ ဦးနှောက် Res ။ 1989; 498: 199-203 ။ [PubMed]
Hursh SR, Silberberg အေစီးပွားရေးဇုန်ဝယ်လိုအားနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတန်ဖိုး။ Psychol ဗျာ 2008; 115: 186-198 ။ [PubMed]
Hursh SR, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အခြားစစ်ကူများအတွက်တောင်ပံကစားသမား G. အပုံမှန်ဝယ်လိုအား။ J ကို Exp စအိုပြုမူနေ။ 1995; 64: 373-384 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂျုံးစ် SR, Lee က TH, Wightman RM, Ellinwood Eh ။ အဆိုပါ striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်လွှာမှစည်းမျဉ်းအပေါ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှု: စသည်တို့အတွက် voltammetric အကဲဖြတ်။ Psychopharmacology (Berl) 1996; 126: 331-338 ။ [PubMed]
Jonkman S က, Pelloux Y ကို, Everitt BJ ။ အပြစ်ပေးကင်းရှာထဲမှာ dorsolateral နှင့် midlateral striatum ၏အခန်းကဏ္ဍ Differential ။ J ကို neuroscience ။ 2012; 32: 4645-4650 ။ [PubMed]
Kalivas PW, extracellular dopamine နဲ့ကင်းဖို့အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း Duffy P. အချိန်သင်တန်း။ ဗြဲ Dopamine axon ဆိပ်ကမ်း။ J ကို neuroscience ။ 1993; 13: 266-275 ။ [PubMed]
Millan EZ, Marchant NJ, McNally မိသားစုဆရာဝန်။ မူးယစ်ဆေးရှာ၏မျိုးသုဉ်း။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2011; 217: 454-462 ။ [PubMed]
Oleson eb ရစ်ချတ်ဆင် JM, ရောဘတ် DC က။ တစ်ဦးကဝတ္ထု IV ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြွက်များတွင်: ကိုကင်းသုံးစွဲမှုနှင့် paid အကျယ်ချဲ့စျေးနှုန်းအပေါ် differential ကို dopamine ၏ဆိုးကျိုးများ, serotonin, နှင့်ဂါဘမြို့သားမူးယစ်ဆေး pre-ကုသမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2011; 214: 567-577 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Oleson eb, ရောဘတ် DC က။ နောက်ဆုံးအချိုးသို့မဟုတ်စားသုံးမှုဖြစ်စေ၏တင်းမာမှုလျှော့ချထုတ်လုပ်ရန်ကြောင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်းကိုအောက်ပါစျေးနှုန်းနှင့်ကိုကင်းသုံးစွဲမှု၏အမူအကျင့်, စီးပွားရေးအကဲဖြတ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34: 796-804 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Oleson eb, ရောဘတ် DC က။ တံခါးခုံလုပျထုံးလုပျနညျး: ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု။ နည်းလမ်းများ Mol Biol ။ 2012; 829: 303-319 ။ [PubMed]
Ostlund SB, Leblanc KH, Kosheleff AR, Wassum KM, Maidment NT ။ Phasic mesolimbic dopamine အချက်ပြထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပံ့ပိုးကူညီ encodes ။ Neuropsychopharmacology ။ 2014; 39: 2441-2449 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Parsons LH, တရားမျှတမှု JB ။ , Jr serotonin နှင့်နျူကလိယ accumbens, ventral tegmental ဧရိယာနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ dorsal raphe နျူကလိယအတွက် dopamine ာင်း။ J ကို Neurochem ။ 1993; 61: 1611-1619 ။ [PubMed]
ပီယပ် RC, Kalivas PW ။ စိတ်ကြွဆေးကဲ့သို့သော psychostimulants မှအမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏တစ်ဦးက circuitry မော်ဒယ်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1997; 25: 192-216 ။ [PubMed]
Post ကို RM ။ ာင်းသို့မဟုတ်သည်းခံစိတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အချိန်ကြားကာလ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွနှိုင်းယှဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1980; 26: 1275-1282 ။ [PubMed]
Prisciandaro JJ, ယောသပ် je, Myrick H ကို, et al McRae-Clark က AL, Henderson က S, Pfeifer J ကို။ ကိုကင်းနှင့် (စာနယ်ဇင်းအတွက်) တုံ့ပြန်မှုတားစီးတွေကိုစွဲလမ်းမှကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ကို Activation ၏အနှစ်အကြား 2014The ကြားဆက်ဆံရေး။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Becker က JB ။ အမူအကျင့်ာင်း striatal တစ်ရှူးများထံမှစိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်ကို စသည်တို့အတွက်။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1982; 85: 253-254 ။ [PubMed]
Siciliano, CA, Calipari ES, ကူးတို့ MJ, ဂျုံးစ် SR ။ အဆိုပါ dopamine terminal ကိုမှာစိတ်ကြွဆေးလုပ်ဆောင်ချက် Biphasic ယန္တရားများ။ J ကို neuroscience ။ 2014; 34: 5575-5582 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Venton BJ, Seipel ကို AT, Phillips က PE, Wetsel WC, Gitler: D, Greengard P ကို, et al ။ ကိုကင်းတဲ့ synapsin-မှီခိုရံရေကူးကန်၏စည်းရုံးခြင်းအားဖြင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွားစေပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 3206-3209 ။ [PubMed]
Vezina P ကို, Leyton အမ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများတွင်တွေကိုနှင့်လှုံ့ဆော်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးအေးစက်။ Neuropharmacology ။ 2009; 56 (ပျော့ပျောင်း 1: 160-168 [။PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zimmer BA, Oleson eb, Roberts သည် DCS ။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအဆိုပါလှုံ့ဆျောမှုကင်း၏ဦးနှောက်အဆင့်ဆင့် spiking တစ်သမိုင်းပြီးနောက်တိုးလာနေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2012; 37: 1901-1910 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]